Burger King dia manao rebranding tanteraka ny marika | Famoronana an-tserasera
ny ny lokon'ny loko dia nanjary sehatra afovoany tato anatin'ny taona vitsivitsy ary noho io antony io indrindra no nahatonga ny Burger King nanao "rebrand" ny sary famantarana azy ireo hamela anay ho talanjona amin'ny fomba nampiasan'izy ireo izany fomba fahazoana ny famolavolana izany izay tsy sahaza ny aloka sy ny asa kanto hafa.
Ary izany ve ilay orinasa miandraikitra ny fitondrana izany sakafo haingana fanta-daza izany ho anay izay miandraikitra ny famatsiana avy amin'ny toeram-panorenany, dia eo am-panaovana gadona hira vaovao amin'ny marika misy azy ireo.
Mazava ho azy, miaraka amin'ireo loko fisaka ireo ho toy ny axis afovoany, ny Retro dia miverina miverina ho an'ny andian-tsary izay mampiseho amintsika ny mikasika lehibe ao amin'ny na ny famolavolana typeface vaovao miaraka amin'izany «sahy» izay no mitana toerana ambony tokoa.
Tsy maintsy ampiantsika koa izany palette miloko manokana Izay mitondra antsika mivantana amin'ireo psychedelics tamin'ny taona 70 (eny avy amin'ireo sarimihetsika toa Easy Rider).
La Ny masoivoho Jones Knowles Ritchie no miandraikitra ny "rebranding" avy amin'ny Burger King, ary izy io dia nitondra fonosana vaovao, famolavolana menio, varotra, haingon-trano ary koa izay rehetra mifandraika amin'ny media sosialy.
Ary ho an'ireo izay taona vitsivitsy izy ireo, ity logo vaovao ity dia manana fitoviana akaiky amin'ny Burger King's 1969. Noho izany dia mahita sary famantarana vaovao isika izay ny teny roa dia ny atin'ny hamburger tena manan-karena amin'ny fahitana ary mijanona miaraka amin'ireo lokony roa marika.
Nanjavona ilay manga taloha ary handeha amina fonosana vaovao misy an'io endritsoratra io isika ka "psychedelic" ka milaza ny marina dia mahavoa be an'ny Burger King. Ity font ity dia «Flame» ary aingam-panahy avy amin'ireo hatsarana hita maso mitovy amin'ireo lovia fampiasa indrindra azy.
ny ny loko fisaka dia mitondra ny Burger King hiverina amin'ny taona 70 mba hahafahanay midina any amin'ny hotelin'izy ireo na manafatra zavatra ao an-trano handany ny oram-panala amin'ireto faritra ireto. Taona iray nananan'i Burger King tolo-kevitra mahaliana toa ireny sarontava ireny...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » "Rebrand" vaovao an'ny Burger King dia loko iray ahafahana mahita loko